Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi - amajikijolo simnandi kakhulu futhi unempilo. Yingakho abalimi abaningi emikhakheni yabo uzimisele itshale izihlahla ezimbalwa noma ipulazi encane. Ngokwemvelo, bafuna enjalo injongo izinhlobo ukuthi ngabe ukuhlanganisa futhi adambise lokunakekela, futhi ulinganisele ezinhle ukuguga futhi isivuno futhi zizwakale kahle. Ukumelana ezifweni kanye izinambuzane, ukuze izinguquko ezinkulu esivela sezulu oluyingozi zamanje, nakho kubhekelwe. ochwepheshe abanolwazi umkhakha yamagilebhisi ingenye izinhlobo engcono kubhekwe Augustine.
Augustine - amagilebhisi, uhlala ngokuvumelana negama layo yesibili - mkhuba. Wafaka eBulgaria, yathi chithi saka ngaphansi kwegama Pleven esitebeleni. Libhekisela eyigugu kakhulu in viticulture nethebula izinhlobo kuhluke ukuzinza enviable ngokuya amazinga aphezulu umkhiqizo. Augustine Akuvamile iyagula. Amagilebhisi singangena kule izifo ezingathinta uhlelo impande yawo, amahlamvu noma amahlumela, kodwa Kutholwe kalula futhi iphathwa ngempumelelo. Kepha yamakhaza, lithathelwe ezihlukahlukene futhi ngempela kulolu isivuno cishe lokukwazi. Akakubekezeleli ukwehlisa izinga lokushisa ukuze -25 - degrees 26, lapho iningi ithebula izinhlobo nje zilimaze futhi lufe. Nakhu u-Augustine ethembisa - amagilebhisi, izithelo nemifino amapulazi ukuthi itshalwe esingamahektare beqinile, nokususa amagilebhisi ehlathini isisindo kusuka 400 amagremu ukuba 1 kilogram. Ubujamo ibhulashi zifane i nabokhulumile Isigaxa noma mbhoshongo - ithiphu phansi. umbala Esikhunjeni Esiphaphathekile eziluhlaza amajikijolo nakho u-Augustine. Amagilebhisi, ukufinyelela ukuvuthwa, izuza solar tint aphuzi, uma ngamunye izibani berry ngaphakathi. Ngisho ekukhanyeni okugqamile they cishe ayevumela ngokusebenzisa - umbono omuhle kakhulu! Bumnandi, kuqabule, namanzi ezinhle. Iwayini, ngasendleleni, nayo otholakala ngenxa izinkomba ezinjalo yalesi ezihlukahlukene amnandi ngaphandle izithasiselo ezengeziwe. Ngemva okuqukethwe ushukela wawo 20%! A isisindo isilinganiso amajikijolo - mayelana 6 amagremu, kodwa uma unakekelwa kahle, zikhula olukhudlwana. Iphunga lokusanhlamvu amagilebhisi Augustine ubonisa obucayi, kahle uvumelane ukunambitheka.
Okuhle kunakho konke ukuthi inhlobo ikhula on nenhlabathi ne ngenkasa ezinhle noma umswakama yemvelo: okunomsoco umhlaba omnyama, wokhuni oluqinile avundiswa organic peregnoistoy isisindo. Ngaphansi kwezimo ezinjalo, wenza kahle, ngempela linesizotha. Harvest ifika emazingeni aphezulu. Ngaphansi evumayo izimo zezulu, isilinganiso ehektheleni uya 130 quintals. Yini-ke kubhekwa umphumela esihle kakhulu yamagilebhisi kulinywe. Amajikijolo bubekezelelwa kahle zokuhamba, ngakho-Augustine njalo zithunyelwe ezindaweni ezihlukahlukene ezweni elaliyiSoviet Union nakwamanye amazwe. Enye ocacile plus grade - lapho emabhulashini zivuthiwe angadingi zokuqaleka ngokushesha elalivela esihlahleni. Amagilebhisi ngaphandle isengozini ezilimele kungaba emuva emavikini amathathu ukulinda bakhe "emzabalazweni." It ikuvumela ukuba ahlele emikhulu, ukuvuna lohleliwe zonke emasimini umnotho kanyekanye. Eningizimu esefinyelele ukuvuthwa sesitshalo maphakathi no-Agasti, ngo-kulapho enyakatho - ngasekupheleni kuka-August - ekuqaleni kuka-September.
Thenga izithombo amagilebhisi nesehlukaniso ezihlukahlukene olukhulu olungakaze kutuswa abanikazi izindlu zasemaphandleni kanye Cottages. Ngaphezu zonke izimfanelo ezinhle, kuyafaneleka kokukhuluma indlela yinde umvini ukukhula. Nezihlahla zifinyelela ubude obungamamitha elingamamitha ambalwa, ngakho amagilebhisi Augustine ukwenza nemengamo omkhulu futhi pergolas, enika umthunzi aminyene anikeza ukuphila e ukushisa kwehlobo futhi ennobling, ihlobise landscape engadini. Vele ukhethe indawo libalele, okwanele bevela kuzo zonke izinhlangothi, ukuze amajikijolo avuthwa ngokulinganayo. Futhi ungakhohlwa mayelana ukuthambisa njalo phakathi nayo yonke inkathi ye ezinezithelo, izihlahla ngesikhathi esifanele futhi entwasahlobo ngibopha garter emvinini izinqubo, ngakho awazange ayiphule ngaphansi Isisindo amagilebhisi.
Inhlanhla, balimi, abatshali kanye kwesivuno esihle!
Phansi umdwebo - kuyinto ... amacebo zehluke ibalazwe?
Ginger tincture: Old iresiphi Tibetan (utshwala)